ComPsych's 2021 Health @Work Award na-aga na nchekwube n'ịntanetị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » ComPsych's 2021 Health @Work Award na -aga Optimism Online
ComPsych's 2021 Health @Work Award na -aga Optimism Online
Optimism dị n'ịntanetị nwere obi ụtọ ịkpọsa na ahọpụtala ya dị ka onye mmeri ọla edo kacha mma na klas maka ụlọ ọrụ n'okpuru ndị ọrụ 100 na ComPsych's 2021 Health @Work Award. Ugbu a n'ime afọ 17th, onyinye a na-amata ụlọ ọrụ ndị na-eme ka ahụike na ọdịmma nke ndị ọrụ dịkwuo mma site na mmemme ọhụrụ nke bara uru nye ndị ọrụ ha.
“Ihe nrite a na-ekwusi ike nkwa anyị na ndị ọrụ anyị na omenala ụlọ ọrụ anyị. Ọ dịghị ihe dị mkpa karịa ahụike anụ ahụ na nke uche nke otu anyị, "Onye isi nchịkwa New Orleans Sam Olmsted kwuru. "Obi dị m ụtọ na m so na nzukọ na-eji ma na-ege ndị ọrụ ya akpọrọ ihe n'ezie."
Optimism n'ịntanetị na-eso ndị otu mba na mba ụwa na-ekerịta ọkwa ahụ, gụnyere National Basketball Association (NBA), Boston Medical Center, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-emepụta mmetụta zuru ụwa ọnụ.
Na mgbakwunye na onye nhazi ọrụ Sara Bandurian na 2020, nchekwube n'ịntanetị nwere ike ịmalite ọtụtụ mmemme na atụmatụ ndị na-ekwu maka ahụike ndị ọrụ. Ha malitere ụlọ ịgba ụkwụ "Optivers" iji nyere aka kpalie ọtụtụ mmegharị site na asọmpi enyi n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Ha nwere klọb akwụkwọ na-ezukọ kwa ọnwa ma na-enye mmemme enyemaka ndị ọrụ maka ndụmọdụ ahụike uche.
Kọmiti Omenala Ọdịbendị nke ime n'ịntanetị na-aga n'ihu na-eche ụzọ ọhụrụ maka ndị ọrụ ga-esi na-akpakọrịta ma nọrọ na njikọ, nke dị mkpa karịa ka ọ dị kemgbe mgbasawanye ụlọ ọrụ na Atlanta na Washington DC.
"Ihe kachasị mma gbasara mmemme ahụike na ahụike anyị bụ na ndị ọrụ n'onwe ha mere ha, ya mere a na-ahazi ha kpamkpam na omenala ụlọ ọrụ anyị," ka Onye nhazi ọrụ Sara Bandurian kwuru. "Anyị chọrọ ijide n'aka na ndị mmadụ na-enwe mmetụta na a na-akwanyere ha ùgwù, na-akwanyere ha ùgwù na ekele maka ihe niile ha na-eme."